Muxuu ahaa hadalkii ugu dambeeyey oo uu Farmaajo kusoo qoro bartiisa Twitterka? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu ahaa hadalkii ugu dambeeyey oo uu Farmaajo kusoo qoro bartiisa Twitterka?
Muxuu ahaa hadalkii ugu dambeeyey oo uu Farmaajo kusoo qoro bartiisa Twitterka?
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bartiisa Twitter soo dhigay qoraal cusub oo uu uga hadlayey maalinta 08 March oo ku beegan maalinta haweynka adduunka.
Madaxweynaha ayaa hambalyo ku aadan maalintaan u diray haweynka Adduunka gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa mudan in la raaco wadadooda.
Madaxweynaha ayaa haweynka Soomaaliyeed ku tilmaamay inay yiihiin sida dayaxa oo kale waxayna midaas muujineysaa inuu madaxweynaha qirayo dadaalka ay haweynka soo maaliyeed kasoo mareyn badbaadinta Ummadda Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa qoraalka aad hoos uga jeedo kusoo daabacay boggiisa rasmiga ah ee Twitterka waxaana hadalkaas falcelin ka sameeyey kumanaan kun oo Soomaali ah kuwaas oo madaxweynaha saaxiib kula ah Twitterka.
Sidoo kale waxaa hambalyo midaan la mid ah diray Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maanta ku tilmaamay inay tahay maalin ku weyn haweynka Soomaaliyeed ayna mudan yihiin in looga mahad celiyo dadaalkii ay kasoo mareyn samata bixinta umadda Soomaaliyeed.
08 March ayaa ah maalin ay caalamka uga asteysan tahay in loo dabaaldago maalinta haweynka Adduunka Soomaaliyana waxay kamid tahay dalalka dabaadalagaas ka qeyb qaayo.